China skull interlink ipleyiti - 2 imingxuma mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
ipleyiti yoqhakamshelwano yokakayi - imingxunya emi-2
Ukubuyiselwa kwe-Neurosurgery, ukulungisa iziphene ze-cranial, ezisetyenziselwa ukulungiswa kwekhakhayi kunye noqhagamshelo.
• Akukho atom yentsimbi, akukho magnetization kumandla ombane. Akukho siphumo kwi-x -ray, CT nakwi-MRI emva kokusebenza.
• Iipropathi ezizinzileyo zeekhemikhali, ukuhambelana kwezinto kunye nokuxhathisa umhlwa.
• Ukukhanya kunye nobunzima obuphezulu. Ukukhuselwa okuzinzileyo komcimbi wobuchopho.
• I-Fibroblast inokukhula ibe yimingxunya emva kokusebenza, ukwenza i-titanium mesh kunye nethishu edibeneyo. Izinto ezifanelekileyo zokulungiswa kwempahla!
screw2.0mm iqhosha lemenyu self-kusombiwa
umsiki wekhebula (isikere se-mesh)
Imingxunya emibini ethe tyaba yinkqubo ehlengahlengisiweyo, ebanzi enika ubhetyebhetye, ukusebenziseka lula, kunye nokufakwa komgangatho ophezulu kunye nezixhobo. Isicwecwe esisezantsi seplate ye-0.5 mm yokumiliselwa okuncinci. Inkqubo yesixhobo esinye sokulungiswa okukhawulezileyo kunye okuzinzileyo kweempazamo zethambo le-cranial.
Ukhakhayi luyimilo eyinyani eyakha intloko kwizilwanyana ezinomqolo. Amathambo okakayi axhasa ukwakheka kobuso kwaye anika indawo ekhuselayo. Ukhakhayi lwenziwe ngamacandelo amabini: i-cranium kunye ne-mandible. La macandelo mabini abantu yi-neurocranium kunye nolusu lwamathambo obuso olubandakanya ukugunyaziswa njengeyona thambo layo likhulu. Ukhakhayi lukhusela ingqondo, lungisa umgama wamehlo amabini, lungisa indawo efanelekileyo yeendlebe ukuze wenze isandi sasendaweni esichaziweyo kunye nomgama wezandi. ihlala isenzeka ngenxa yokuqaqanjelwa ngamandla, ukuqhekeka kokakayi kungaphula elinye okanye amanye amathambo asibhozo enza inxenye yegreyini.
Ukuqhekeka kungenzeka kwindawo ekufutshane nendawo ekufuphi nefuthe kunye nomonakalo kulwakhiwo olungaphantsi kwekhakhayi njengembumba, imithambo yegazi kunye nengqondo. Ukuqhekeka kolukakayi kuneentlobo ezine eziphambili, ezinomgca, ezixinezelekileyo, ezinesifo, kunye ne-basilar. Olona hlobo luqhelekileyo kukuqhekeka komgama, kodwa akukho sidingo sokwenza ungenelelo lonyango Ngokwesiqhelo, ukwaphuka koxinzelelo kudla ngokudityaniswa namathambo aphukileyo angaphakathi ashiye amakhaya, ngenxa yoko kufuneka ungenelelo lotyando ukulungisa umonakalo wethishu. Ukuqhekeka kwe-diastatic kwandisa ii-sutures zokhakhayi zichaphazela abantwana abangaphantsi kweminyaka emithathu, kwaye ii-basilar fractures zikumathambo emazantsi okakayi.
Ukuqhekeka kogebhezi. Ukubethwa ngesando, ilitye okanye ukukhatywa entloko kunye nezinye iintlobo zengozi eyomeleleyo edla ngokubangela ukophuka kogebenga. I-11% yokulimala entloko kwenzeka kwezi ntlobo zethambo kuqhekezwe amathambo apho amathambo aphukileyo ashenxisela ngaphakathi. Ukuqhekeka kogebenga koxinzelelo kubangela umngcipheko omkhulu wokunyuka koxinzelelo kwingqondo, okanye ukopha kwengqondo okutyumza izicwili ezibuthathaka.
Xa kukho ulaceration ngaphezulu kokuqhekeka, i-compound yoxinzelelo lwentloko iya kwenzeka. ukubeka i-cranial cavity ngaphakathi ngokunxibelelana nendalo engaphandle, ukwandisa umngcipheko wongcoliseko nosulelo. Kwizinto ezintsokothileyo zokudakumba, ixesha elihlala ixesha elide likrazukile. Uqhaqho kufuneka lwenziwe ngokudakumba kokakayi ukuphakamisa amathambo kwingqondo ukuba bayayicinezela ngokwenza imingxunya ye-burr kwikakayi eliqhelekileyo eliqhelekileyo.
Ukhakhayi lomntu lwahlulwe ngokwamalungu amabini: i-neurocranium, eyenziwe ngamathambo asibhozo e-cranial ahlala kwaye akhusele ingqondo, kunye ne-facial skeleton (viscerocranium) eyenziwe ngamathambo alishumi elinesine, kungabandakanyi ossicles amathathu endlebe yangaphakathi. Ukuqhekeka kogebhezi kuthetha ukuba uqhekeko kwi-neurocranium, ngelixa ukwaphuka kwengxenye yobuso bekakayi kuqhekezwa ebusweni, okanye ukuba umhlathi uphukile, ukwaphuka mandibular.
Amathambo asibhozo e-cranial ahlukaniswe yimisipha: ithambo elinye elingaphambili, amathambo amabini eparietal, amathambo amabini okwexeshana, ithambo elinye le-occipital, ithambo elinye le-sphenoid, kunye nethambo elinye le-ethmoid.
Okulandelayo: Itafile ye-interlink fossa yethutyana
I-Anodized Cranial Interlink Titanium Plate
I-Cranial 2 Hole Interlink Titanium Plate
Iplani ye-Cranial Mastoid Interlink Titanium Plate
Isingxobo seCranal Fossa Interlink Titanium Plate
I-orthognathic 0.6 L ipleyiti emi-4 imingxunya
umnatha weqhwa lekhephu i
I-orthognathic anatomical 0.8 L ipleyiti
Umngcipheko omkhulu we-maxillofacial micro 90 ° L ipleyiti
Ukutshixa iplati encinci ethe tyaba